Natiijooyin: Man United oo Garaacday Chelsea,Halka Arsenal Ay Bilaabasho Fiican Ay Ku Furteen Horyaalka,Maxase Laga Bartay Kulamadasi – Bandhiga
Natiijooyin: Man United oo Garaacday Chelsea,Halka Arsenal Ay Bilaabasho Fiican Ay Ku Furteen Horyaalka,Maxase Laga Bartay Kulamadasi
Kooxaha Man United iyo Arsenal aya guulo ku furtay kulamadoda furitanka Hotyaalka premier league,kadib marki ay cagta mariyeen Chelsea iyo Newcastle.
Arsenal aya booqatay St-james Bark kadib kulan xiiso badna oo uu macalinka Arsenal ku so bilaabay xidigo ka mid ah kiwiisa da’da yar waxa uu goolka guusha ka helay xidigiisa Pierre-Emerick Aubameyang daqiiqadii 57aad ee ciyaarta.
Waxay aheyd bilaabasha fiican St-james Bark waxa ku sugnaa tageraal garaya 47635 kuwaasi u so dawasho tagay kulankaan.
Dhanka kale waxa kulan weyn uu dhex maray kooxaha Man United iyo Chelsea kulankaasi oo ka dhacay Old Traforrd,garoonka United.
Wuxu aha kulanka ugu weyn ee furitaanka horyaalka EPL-ka Lambard iyo Ole Gunnar Solskjaer kuwaasi oo horay u so aha cayaartoy koxaha iminka ay maamulayaan.
Guuldaro weyn ayu ku bilaawday wayihiisa EPL-ka macalin Lambard waxana logaga adkaday 4-0
Kadib kulan ku bilowday xiiso iyo in la is gaad gaado waxa gool ku laad heshay man united.waxana u saxiixay Rashford daqiiqadi 18aad,martial aya si raacsaday gool kale bilowga qeybti labad 56 daqiqo marki ay socotay ciyarta.
Kadib qaladaad badan oo ka jiray dhanka Cesar Azpilicueta man united aya u muuqatay mid il ay duleeshan tay booskisa waxana goolal raacsaday Rashford daqiiqadii 67aad,halka Deniel James uu xalay rumeyay riyadiisa Premier League waxana uu dhaliyay goolka afaraad daqiiqadii 81aad ee kulanka,kulanka aya natiijadaas kuso idlaaday.
Kulankan aya aha mid kooxda Chelsea lagu garacay dhanka qadka dhexe iyo budaha rogaal celinta ah (Counter-attack) taasi oo ay kooxda Lambard xalin kari wayeen.
Maxan ka baran karnaa kulamadaasi.
Paul Pogba wuxuu si toos ah ugu lug lahaa 18 gool oo Premier League ah tan iyo markii Ole Gunnar Solskjær uu qabtay shaqada Manchester United (10 gool, 8 caawin);
Guushii 4-0 ee ay Man United ka gaadhay Chelsea ayaa ahayd tii ugu weyneyd ee ay ka gaarto Chelsea kulan ka mid ah horyaalka heerka kowad tan iyo markii ay 4-0 kaga badiyeen bishii March 1965 xiligii Matt Busby.
Ka dib markii uu bedel ku soo galay intii lagu jiray kulankii ay Arsenal guusha 1-0 ah ka gaartay Newcastle, Nicolas Pépé wuxuu noqday ciyaaryahankii 200-aad ee kala duwan ee u ciyaara Arsenal premierleague.
Chelsea ayaa maalin ku qaadan doonta aaga dib ugu laabashada Premier League markii ugu horeysay tan iyo Sebtember 30th 2000.
Tan iyo kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League ee Arsenal bishii Febraayo 2018, kaliya Mo Salah (36) ayaa dhaliyay goolal ka badan tartankaan marka loo fiiriyo Pierre-Emerick Aubameyang (33).
Frank Lampard wuxuu qaatay guuldaradii ugu weyneyd ee soo gaarta macalin Chelsea kulankooda ugu horreeya tan iyo markii Danny Blanchflower guuldarro 7-2 ay ka soo gaartay Middlesbrough bishii December 1978.
Waxaa jiray kaliya 95 ilbiriqsi oo u udhaxeyay goolkii labaad iyo seddexaad ee Manchester United kulankii ay la ciyaareen Chelsea.
Pierre Emerick-Aubameyang ayaa qarka u saaran inuu ciyaaro kulankiisii 50aad ee Premier League ee Arsenal – Xiddiga heerka caalami ee dalka Gabon ayaa durbaba dhaliyay ugu yaraan labo gool in ka badan goolasha kale ee Gunners ee ilaa 50 kulan ee ugu horeysay ee uu kooxda u ciyaaray tartankan.
Manchester United waligeed guuldarro kama aysan soo gaarin kulan ay ku ciyaareen Old Trafford iyago hogaaminayay qeybta hore, barbaro 16,waxay guuleysteen 263-kulan oo ka mid ah 279 kulan oo ay ciyaareen.